Search Engine Optimization ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်: အချို့သောအခမဲ့ SEO အကြံဥာဏ်နှင့်အတူ | Martech Zone
Search Engine Optimization ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်: အချို့သောအခမဲ့ SEO အကြံဥာဏ်နှင့်အတူ
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 1, 2018 ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 1, 2018 Douglas Karr
ဒီတနင်္ဂနွေမှာအိမ် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ကော်ဖီသောက်ဖို့ငါလာခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသူ၏ကုမ္ပဏီသည် SEO အေဂျင်စီတစ်ခုနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်ကိုသူညည်းတွားခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့နှင့်သူတို့သုံးစွဲခဲ့သည့်ငွေအတွက်သူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်အမ်းငွေရှိမရှိမသေချာပေ။
အဆိုပါအတိုင်ပင်ခံနှင့်အတူတစ်သက်တာစုစုပေါင်းကျော် $ 100,000 ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရပ်တန့်သွားရင်၊ အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားမှာကိုသူတို့နှစ် ဦး စလုံးစိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ သူတို့ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်အိမ်သာထဲကိုပိုက်ဆံရှင်းပစ်လိုက်တာပဲ။ သူတို့ကိုမေးခွန်း ၃ ခုမေးခဲ့တယ်
SEO ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်မှုကိုမည်သို့သက်သေပြနိုင်ခဲ့သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောပထမ ဦး ဆုံးအချက်တစ်ခုမှာဖုန်းသို့မဟုတ်ဝဘ်ဆိုက်များအားလုံးကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှ ဦး ဆောင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုသေချာစွာသေချာစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ Word of Mouth နှင့်တိုင်ပင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုသူတို့ဖောက်သည်များအားမည်သို့မေးမြန်းကြောင်းအမြဲတမ်းမေးမြန်းသည်။ ဤအချက်အလက်များကို၎င်းတို့၏အရောင်းအဖွဲ့သို့မဟုတ် CRM သို့လွှဲပြောင်းပြီးမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုအသွားအလာရှာဖွေရန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အဆိုပါအတိုင်ပင်ခံဒီအမှုကိုပြုခဲ့မသာသူ ဘယ်တော့မှ သူတို့အော်ဂဲနစ်အသွားအလာမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရတဲ့ခဲ့ကြသည်ဖြစ်စေမသူတို့ကိုမေးတယ်။
မင်းမနက်ဖြန် SEO SEO ကုမ္မဏီကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်ဘယ်အလုပ်ကရပ်မှာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် SEO အလုပ်ကိုလုပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်သော့ချက်စာလုံးများကိုသုတေသနပြုခြင်း၊ ပြိုင်ဘက်များကိုရှာဖွေခြင်း၊ ဆောင်းပါးများရေးသားခြင်း၊ ဂရပ်ဖစ်လုပ်ခြင်း၊ ဖောက်သည်ဓာတ်ပုံများရယူခြင်းနှင့်စာမျက်နှာတိုင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ပြုလုပ်ရန်ဗီဒီယိုများရိုက်ကူးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ ဦး ဆောင်မှုကိုစီစဉ်ထားသည့်အရောင်းအစည်းအဝေးများ၊ စမ်းသပ်မှုများ၊ အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်များ (သို့မဟုတ်) သရုပ်ပြပွဲများအတွက် ၀ ယ်သူခရီးစဉ်ကိုရှင်းလင်းစွာအမှတ်အသားပြုထားသည်။ သုံးနှစ်အတွင်းတွင်၊ ဤ SEO အကြံပေးသည် ဘယ်တော့မှ သူတို့ရဲ့ site ကိုထိမိခဲ့တယ်။
ဒေသအလိုက်သို့မဟုတ်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်အမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်သောအသုံးအနှုန်းများကိုသင်မည်သို့သတ်မှတ်သနည်း။ SEO အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များကဲ့သို့သောအရာတို့ကိုလှည့်ပတ်လေ့ရှိပါတယ် သင်သည်ပြီးခဲ့သည့်လကထက်သော့ချက်စာလုံးအရေအတွက် X ကိုအဆင့်သတ်မှတ်သည်။ ဂရိတ် ... ဒါပေမယ့်အဲဒီသော့ချက်စာလုံးတွေကဘာတွေလဲ။ အကယ်၍ သော့ချက်စာလုံးများသည်သင့်ကုမ္ပဏီ၏အမည်ပါ ၀ င်ပါက၎င်းသည်အသုံးဝင်သော်လည်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ ကုမ္ပဏီ၏အမည်၊ ထုတ်ကုန်အမည်များ (သို့) အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိလူများအတွက်သင်၏ကုမ္ပဏီသည်အဆင့်သတ်မှတ်သင့်သည်။ Search Engine optimization ၏အစစ်အမှန် ROI သည်အမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုကိုင်တွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လာမည့်ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသုတေသနပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းဤ ၀ ယ်ယူသူသည်အမှတ်တံဆိပ်သတ်မှတ်ချက်များအတွက်ထိပ်ဆုံး ၃ ခုတွင်သာအဆင့်သတ်မှတ်ခံရသည်။ အနိမ့်ဆုံးအမှတ်တံဆိပ်မဟုတ်သောအသုံးအနှုန်းသည်နံပါတ် ၆ ဖြစ်သည်။
SEO ဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့စီးပွားရေးလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ SEO ကိုတရားမျှတစေရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ သင်ဟာ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး အတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းဗျူဟာတွေကိုတကယ်လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ အကြောင်းအရာများကိုပေးပို့ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုထင်ဟပ်စေသောတိကျမှန်ကန်သောသတင်းပို့ခြင်းများမရှိပဲသင်ဘယ်လိုပြောနေသလဲဆိုတာမသေချာဘူး။ ၎င်းသည်တစ်ညတည်းမဟုတ်ပါ။ လအနည်းငယ်အတွင်းသုံးစွဲသူသည်ဆောင်းပါး၏ရှေ့ပြေးညွန်းကိန်းများနှင့်ကွန်ရက်အသွားအလာတိုးပွားလာခြင်းကိုမြင်တွေ့နေသင့်သည်။
ဒီအတိုင်ပင်ခံလုပ်နိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်။ ငါ backlinks အပေါ်နောက်ထပ်အပိုဆောင်းအစီရင်ခံစာများဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်အေဂျင်စီကြောင်းအပေါ်ဆောင်းပါးများပို့စ်တင် ~ ~ 300 စကားလုံးများကိုကြွယ်ဝသော link ကိုနှင့်အတူဖောက်သည်ရဲ့ဝဘ်လိပ်စာသို့ပုဒ်မတင်ခဲ့သည်ဆိုဒ်များကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ပြproblemနာတစ်ခုတည်းရှိတယ်။
ထိုဆိုဒ်များသည် link များမျှဝေခဲ့သည့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည် အချစ်ဇာတ်လမ်း သူ၏ဖောက်သည်များ (သို့မဟုတ်အခြား SEO အကြံပေးများ) အတွက်ဖြစ်သည်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များသည်ဆွဲဆောင်မှုမရှိ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းမခံရသည်နှင့်ဖောက်သည်အားမည်သည့်အသိပညာမှမမောင်းနှင်ခဲ့ပါ။
၎င်းသည်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သည့်မဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည် ... သို့သော် Google သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင်၍ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ဂိမ်းကိုရပ်တန့်ရန် (အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကိုကြည့်ပါ) ၎င်း၏ algorithms ကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ search engine ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်၌လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာသောမဟာဗျူဟာကိုခေါ်ဆိုသည် linkearning ပါlinkbuilding ထက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်တိကျသေချာစွာအာရုံစိုက်ပြီးစေ့စေ့စပ်စပ်ဖြစ်သောသုတေသန၊ ဆောင်းပါးများ၊ အရုပ်စာ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများပါဝင်သည်။ အကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်တို့တီထွင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခကြေးငွေပေးသည့်နည်းဗျူဟာများနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးများမှတဆင့်အကြောင်းအရာကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးမြင့်လင့်များကိုအရင်းအမြစ်သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ဂိမ်းတွေ၊ ဟက်ကာတွေ၊
ဖြစ်ချင်တော့ Bubblegum ရှိလူများသည်ဤနည်းဗျူဟာကိုအတိအကျလိုက်နာခဲ့သည်။ Search Engine Optimization ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်။ ၎င်းသည်လှပသော infographic၊ ကောင်းမွန်စွာသုတေသနပြုပြီးကျွန်ုပ်၏ပရိသတ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်အရာကိုခန့်မှန်း? သူတို့က link ကိုရရှိခဲ့သည်!
သတင်းအချက်အလက်ကိုနှိပ်လိုက်ရင် SEO ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်လှပသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောစာမျက်နှာကိုတွေ့လိမ့်မည်။
Tags: Bing သမိုင်းဂူးဂဲလ်သမိုင်းရှာဖွေရေး၏သမိုင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏သမိုင်းအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်seoseo သမိုင်းyahoo သမိုင်း
Fieldboom - စမတ်ပုံစံများ၊ စစ်တမ်းများနှင့်ဉာဏ်စမ်းပဟေesိများ
Oogur: သင်၏ဂူဂဲလ် Analytics စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး URL များကိုတည်ဆောက်ပြီးခြေရာခံပါ
15:2015 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 7, 20 တွင်
ဆောင်းပါးကိုချစ်မြတ်နိုးပါ။ ငါဖလော်ရီဒါ update ကိုအကြောင်းကိုမေ့လျော့ခဲ့သည်
27:2015 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 5, 17
သုံးစွဲသူများအားအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်နှင့်စိတ် ၀ င်စားသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကြိုးစားခဲ့သောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်သာမကအသင်းသားများအတွက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမွန်သော post တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၄ ​​င်းတို့ ၀ န်ထမ်းများအားရှေ့သို့ဆက်လက်လေ့လာရန်နှင့်ကူညီရန်ဤအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အလုပ်လုပ်သောသူတို့ထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငါထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက် post ကိုနှင့်ဖန်တီးမှုသတင်းအချက်အလက်ဖတ်ရှုဖို့ဝမ်းသာတယ်။ အားလုံးအမှုအရာအံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ်။ SEO ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါ။